Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta waxa uu booqday degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose halkaasi oo ay dhawaan la wareegeen Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dhinaca ah. | Somaale.com
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta waxa uu booqday degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose halkaasi oo ay dhawaan la wareegeen Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dhinaca ah.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo ka tirsan Golaha Wasiirada, Saraakiil Ciidan iyo Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa maanta booqday deegaannada loo barakacay ee duleedka Magaalada Muqdisho oo dhawaan lagala wareegay Al Shabaab.
Sheekh Shariif ayaa gaarigii uu saarnaa kaga dagay deegaanka Ceelasha-biyaha ee duleedka Muqdisho halkaasi oo uu kula hadlay dad shacab ah, iyadoo uu ugu baaqay dadkaasi in haddii ay dhibaatooyin kala kulmaan Ciidamada dowladda ay ku waragliyaan Saraakiishooda si tallaabo looga qaado.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa Fagaaro ku yaalla deegaanka Calamada ee duleedka Muqdisho waxa uu kala hadlay dad ku sugna, waxaana Madaxweynaha uu si toos ah u gaaray markii dambe degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose halkaasi oo ay ku sugnaayeen Saraakiil isugu jira Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Ammaanka deegaannada loo barakacay iyo degmada Afgooye ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana la arakayay Ciidamo si aad ah hubaysan oo feejignaan muujinayay kuwaasi oo daadsanaa waddooyinka Magaaladaasi.
Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu gaaray Beerta Sheekh Saacid oo ku taalla degmada Afgooye halkaasi oo ay isugu tageen Wafdigii uu hoggaaminayay Madaxweyne Shariif, Saraakiil ka kala tirsan Ciidamada DKMG ah, kuwa AMISOM iyo Odayaal kuwaasi oo ka hadlay ammaanka degmadaasi.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada AMISOM ayaa soo bandhigay Qariirad ka hadlaysa howlgallada ay ka bilaabeen Soomaaliya oo ay kula waregeen degmada Afgooye, iyagoo sheegay inay wadaan qorshooyin ay kula wareegayaan deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Ra'iisal Wasaaraha la magacaabay ma la mahadin doonaa mise waa lagu qasaari doonaa?!! 0
Puntland Oo Mucaawino Ay Doowlada Soomaaliya Ugu Deeqday Iska Diday Dibna Xamar Ugu Celisay